शेरबहादुर देउवा अब कामचलाउ सभापति मात्रै हो, कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन
अन्तर्वार्ता शेरबहादुर देउवा अब कामचलाउ सभापति मात्रै हो, कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन प्रकाशमान सिंह, नेता– नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसमा १४ औँ महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । तर पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग विस्तारलगायतका विषयमा संस्थापन र इतरपक्षबीच तीव्र विवाद छ । उक्त विवादले महाधिवेशनको मिति नै प्रभावित हुन सक्ने खतरा पनि त्यतिकै छ । अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरीत काम गरेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल समूहमा रहेका नेताहरुले विरोध गरेका छन् । तीमध्ये एक हुन् नेता प्रकाशमान सिंह ।
उनले नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाकै कारण ओरालो लागेको बताउँछन् । जुनसुकै हालतमा पनि अबको महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्नैपर्ने उनको धारणा छ । प्रस्तुत छ, नेता सिंहले बाह्रखरीसँग कांग्रेस महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी :
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सुरु भएकै हो ?
नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएदेखिको मितिले कार्यसमितिको समयावधि चारवर्षको हुन्छ । १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । चार वर्षमा हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो । तर, १३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी सभापतिले पार्टीको विधानले निर्देशित गरेका कामहरु समयमै गर्न सक्नुभएन । संकट परेको खण्डमा एक वर्ष थप्न सकिने विधानमै व्यवस्था छ ।
उहाँले समय हुँदा काम गर्नुभएन । विधानको त्यही व्यवस्थामा टेकेर एक वर्ष कार्यकाल थप्नुभयो । थपिएको एक वर्ष पनि आगामी फागुनमा सकिँदैछ । फागुनमा महधिवेशन नै तोकिसकिएको छ, तिथिमिति तोकेर ।
महाधिवेशनको तिथि तय भइसकेपछि प्रक्रियाहरुले सुरुमा त रफ्तार लिएको थियो । तर, बीचमा कोरोनाका कारणले गर्दा केही महिना गतिविधिहरु अगाडि बढ्न सकेनन्, ठप्प भयो । तर, फेरि हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पहिले तय भएको कार्यतालिका परिमार्जन गरेर क्रियाशील सदस्यता दिने, नवीकरण गर्ने, वडाहरुमा हुने अधिवेशन पुनर्तालिकीकरण गरेर फागुन ७ मै सुरु हुने गरी महाधिवेशनका गतिविधिहरु अगाडि बढेका छन् ।
प्रक्रिया त प्रारम्भ भइसकेको छ । तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न सकिएन भने विधानले तयसपछि के हुन्छ भनेर भनेको त छैन । त्यो अवधिभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । तर, नेपालको संविधानले पार्टीको एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनमा जाँदा पाँच वर्षको ग्याप हुन्छ भनेको छ ।
आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्न सकिएन भने संविधानमा टेकेर फेरि ६ महिना यो कार्यसमितिको समयावधि थप्ने प्रावधान हुन्छ । हाम्रो भनाइ, सकेसम्म जुन मिति तय भएको छ, त्यही मितिमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । कथमकदाचित सकिएन भने संविधानअनुसार थप गरिने छ महिनामाको अवधिमा पनि सवैको
सल्लाहअनुसार फेरि फागुनपछि पनि चैतमा गर्न सकिन्छ । चैतमा नसकिए, वैशाखमा होला, त्यो पनि नभए आगामी जेठमा जसरी पनि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
एकातिर महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । अर्कोतिर विभागहरु विस्तारको काम भइरहेको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि विवाद छ भनिन्छ, यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
१३ औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेकोपछि विधानले महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि दुई महिनाभित्रै पार्टीका सवै निकायहरुले पूर्णता पाइसक्नु पर्छ भनेर किटानै गरेको छ । निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि विभाग विस्तारको काम भइरहेको छ ।
उहाँ (शेरबहादुर देउवा) नेपाली कांग्रेसको सभापति हो । पार्टीको विधानअनुसार उहाँले कामहरु गर्नुपर्ने हो । तर, उहाँ पार्टी विधान उल्लंघन गर्दै १४ औं महाविधेशनलाई प्रभावित गर्न विभागहरु थप गरिरहनुभएको छ । उहाँ प्रजातानित्रक पार्टीभित्र अप्रजातान्त्रिक तवरले विभागहरु गठन गर्नुभएको छ । त्यसको हामीले सशक्त रुपमा विरोध गरिसकेका छौं ।
डेमोक्रेटिक पार्टीमा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज पनि हुनुपर्छ । महाधिवेशन फ्रि एन्ड फेयर त हुनुुपर्‍यो नि । अहिले के देखिएको छ भने महाधिवेशन निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने । सभापतिले त्यस्तै सन्देश दिइरहनुभएको छ ।
कसरी भन्नुहुन्छ महाधिवेशन फ्रि एन्ड फेयर हुन्न भनेर ? के कारण ले यस्तो भन्नुभयो ?
दुई महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने विभागहरु चार वर्षे कार्यकाल सकिसकेपछि महाधिवेशन गर्नका लागि एक वर्ष म्याद थपेको अवधिमा त्यो पनि सकिनै लागेको बेलामा उहाँले एकलौटी तरिकाले गरिरहनुभएको छ । यसले गर्दा विभागमा राखिदिन्छु मलाई भोट दिनुहोस् भनेर भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । आफूलाई सहयोग गर्नेलाई रिवार्ड गरेको जस्तो भयो नि ।
त्यसले गर्दा महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिहरुलाई मैले यस्तो गरेको थिएँ, विभागमा राखिदिएको थिएँ, मलाई सघाउनुपर्‍यो, मैले भनेको ठाउँमा भोट हाल्नुपर्‍यो भन्छ नि । संसद्को निर्वाचन हुँदा पनि सरकारले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि चुनाव प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन । कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले त्यति पनि विचार गर्नुपर्दैन र ?
सभापति काम चलाउ भइसक्नुभयो । चार वर्षीय कार्यकाल सकिएसँगै उहाँको कार्यसमिति काम चलाउमै गइसक्यो । काम चलाउले नियुक्ति गर्न मिल्दै मिल्दैन । त्यस कारण यो राम्रो भएन यसमा करेक्सन हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा हो ।
भनेपछि सभापतिले गरिरहनुभएको विभाग विस्तारको काम रोक्नुहुन्छ ?
हामीले त्यसलाई मान्दैनौं भनिरहेका छौं । र, सभापतिले एकलौटी गरेको खण्डमा पनि हामी सवैलाई आह्वान गर्छौं कि प्रक्रिया पूरा नगरी, प्रजातान्त्रिक पार्टीमा अप्रजातान्त्रिक रुपमा कसैले केही रिवार्ड गरेको खण्डमा त्यसमा जानु भएन । पार्टीका कमजोरी हटाउनका लागि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार काम अघि बढाउनुपर्‍यो ।
यो प्रक्रिया पूरा नगरी कसैले फलाना ठाउँमा तिमीलाई राख्छुभन्दैमा त्यसमा बस्नु कतिको उचित हुन्छ, त्यो त राजनीति गर्ने भनेर बसेका पार्टीका कार्यकर्ताहरु सबैले सोच्नुपर्छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सभापतिलाई विभाग बढाउने स्वीकृति त तपाईंहरुले नै दिनुभएको हो नि, त्यो तपाईंहरुबाट पनि त कमजोरी भएको होइन र ?
होइन, होइन । विधानमा आवश्यकताअनुसार विभाग विस्तार गर्न सकिन्छ भनिएको छ । आवश्यकताअनुसार विभाग विस्तार गर्न सकिन्छ । तर, समयमा गर्नुपर्‍यो नि । अहिले हाम्रो आपत्ति के हो, हाम्रो विमति कहाँनेर हो भने– समयमा गरेको भए त हुन्थ्यो नि । तर, समयनै सकिसकेपछि, आफैं काम चलाउ भइसकेपछि यसरी आउँदै गरेको महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न र पुरस्कृत गर्नका लागि यो गर्नुभएन ।
सभापति देउवाले काम गर्न नसकेको हो कि ? मिलाउन नसकेको हो कि ? तपाईंहरुले काम गर्न नदिएको ? के हो ?
कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । महाधिवेशनमा हामीले रामचन्द्र पौडेलजीलाई नै अघि सारेको हो । मतदान भयो शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभयो । निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएपछि हामीले त्यसको नतिजा मान्यौँ । महाधिवेशनमा पो उहाँले आफ्नो टिम लिएर हिँड्नुभएको हो । त्यस्तै हामी पनि आफ्नो टिम लिएर हिँड्यौं । स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा त प्रजातान्त्रिक पार्टीमा हुन्छ नि ।
उहाँले जित्नुभयो तर सबैको सभापति बन्न सक्नुभएन । आफ्ना नजिकका गुटको मात्रै सभापति हुनुभयो । आफूले भनेको कुरा मान्नेहरुको मात्रै सभापति भएको जस्तो गतिविधिबाट देखाउनुभयो ।
यो ठीक भएन भनेर हामीले सुरुवातबाट नै भन्दै आएका छौं । रिजल्ट आइसक्यो, अब तपाईं पार्टीको सभापति जस्तो व्यवहार गर्नुस्, सबै तपाईंकै कार्यकर्ता हुन्, पार्टीकै कार्यकर्ता हुन्, तेरो–मेरो नभनिकन पार्टीको केन्द्रविन्दुमा राखेर पार्टीको नीति र कार्यक्रमहरु सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनुस् भनेर हामीले पटक पटक भनेका हौँ तर मान्नुभएन ।
आगामी महाधिवेशनमा तपाईं सभापतिको आकांक्षी हो कि होइन ?
कस्तो सीधा प्रश्न गर्नुभयो । आकांक्षी हो कि होइन भन्ने त मेरो पृष्ठभूमि र कामले बताइहाल्छ नि । म पार्टी प्रतिबन्धित हुँदादेखि नै सदस्यबाट सुरु गरेर नेविसंघको काठमाडौं सभापति पनि भएँ । २०४६ सालको जनआन्दोलन, त्योभन्दा अगाडिको सत्याग्रहमा पनि सहभागी भएको हुँ । जेल गएको थिएँ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली भइसकेपछि काठमाडौं जिल्लाको तीन पटकसम्म पार्टी सभापति थिएँ । म त जिल्ला राजनीतिमै सीमित भएर बसेको मान्छे हो । म विद्यार्थी हुँदा पनि काम गरेँ, जिल्ला सभापति भएर बसेँ । पार्टीमा पनि काठमाडौंकै जिल्ला सभापति भएर बसेँ । १० औं महाधिवेशनमा तत्कालीन सभापति गिरिजाबाबुले तिथिमिति र स्थान घोषणा भइसकेपछि काठमाडौंसहित १६ वटा जिल्ला भंग गर्दिनुभयो ।
त्यसबेला मैले प्रजातान्त्रिक पार्टीमा महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि निर्वाचित जिल्ला कार्यसमितिहरु भंग गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो, यो अवैधानिक भयो भनेर मैले आवाज उठाएँ, अभियान नै चलाएँ ।
जिल्ला कार्यसमिति भंग भएपछि म केन्द्रीय कार्यसमितिमा चुनाव लड्न गएँ । केन्द्रीय राजनीति गरेको व्यक्ति त थिइन, तर पनि पोखरा महाधिवेशनमा मेरो तेस्रो बढी मत आयो । पार्टीको बेथिति, पार्टीका अवैधानिक काममा आवाज उठाउँछ भनेर मलाई भोट दिनुभयो । पार्टीलाई ठीक बाटोबाट लैजानका लागि यसले केही गर्छ है भन्ने कारणले नै त होला मैले त्यत्रो भोट पाएको ।
नत्र मभन्दा माथिका धेरै नेता हुनुहुन्थ्यो । रामचन्द्र दाइ र शैलजा दिदीपछि मेरै बढी भोट आएको । आउनुपर्ने त थिएन, कस्ता–कस्ता हस्तीहरु त हारेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य भएँ, त्यसपछि पार्टी फुट्यो । म प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा गएँ । म त्यहाँ पनि उपसभापतिनै थिएँ । पछि पार्टी एकीकरण भयो, त्यसमा पनि म उपसभापतिनै भएँ । पार्टी एकीकरणका लागि अरु कसैले जिम्मा लिन सकेनन् । शेरबहादुरजीले त्यो बेलाको हाम्रो पार्टीबाट मलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिनुभयो । सबै मिलायौं । पार्टी एकीकरण गर्‍यौं ।
१२ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा निर्वाचित भएँ । मेरो प्रतिष्पर्धी विमलेन्द्र निधिजी हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला धेरैले यो प्रकाशमानले कहाँ विमलेन्द्रलाई हराउन सक्छ र जित्न सक्छ भन्थे । तर जितेँ, रिजल्ट आउँदा देखियो । २०४६ पछि २०४८ मा वाममोर्चाकी साहाना प्रधनसँग चुनाव हारेँ । पछि २०५२ सालमा फेरि मनमोहन अधिकारीसँग हारेँ, त्यो बेला उहाँ आफ्नो पार्टीकातर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उमेदवार हुनुहुन्थ्यो ।
दुईपटक चुनाव हारेँ, अहिले लगातार तीनपटक चुनाव जितिसकेँ । तर, पार्टीमा भने कुनै चुनाव हारेको छैन । मलाई धेरैले तामझाम गर्दैन भन्छन् तर म भित्रभित्र काम गरिरहेको हुन्छु सबैलाई चित्त बुझाउनुपर्छ भनेर काम गरेको हुन्छु ।
गएको महाधिवेशनमा पनि म चुनाव लड्छु भनिरहेको थिएँ । विभिन्न कारणबस त्यस्तै भयो । अन्तिममा आएर हाम्रो समूहको बैठक बस्यौ । बैठकले शेरबहादुरको समकालीन त रामचन्द्र पौडेल हो, यसपटक उहाँलाई छोडिदिउँ भनेपछि मैले छोडेको हो ।
त्यस्तै संसद्को कुरा गर्दा म पाँचपटक त मन्त्रीनै भइसकेको मान्छे । संविधान जारी गर्दा म उपप्रधानमन्त्री थिएँ । पार्टी संसदीय दलको उपनेता पनि भइसकेको हुँ । रामचन्द्र पौडेल नेता, म उपनेता थिएँ । यस पटक मैले शेरबहादुर देउवासँग संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिष्पर्धा गरेको हुँ ।
भनेपछि यता उपप्रधानमन्त्री भइसकेँ, पटक पटक मन्त्री भइसकेँ । डेपुटी लिडर भइसकेँ । नेतृत्वका लागि आफूलाई तयार गरिसकेँ ।
यस्तो व्यक्तिले आकांक्ष किन नराख्ने र ? तर, पनि एउटा कुरा के हो भने शेरबहादुर देउवाबाट अब यो पार्टी चल्दैन भन्ने जोजो साथीहरु हुनुहुन्छ हामी सबै एक ठाउँमा बस्नुपर्छ । हामी एकठाउँमै बसिराख्छौं । सिटौलाजीले पनि शेरबहादुर देउवाबाट पार्टी चल्दैन भनिसक्नुभएको छ ।
अहिले कृष्णप्रसाद सिटौला पनि तपाईँहरुकै समूहमा आउनुभएको हो ?
होइन, होइन । समूहमा भन्नुको मतलब शेरबहादुरबाट पार्टी चल्दैन भनेर उहाँले पनि भनिराख्नुभएको छ । सहमति जनाउनुभएको छ । हाम्रो त पहिलेदेखिनै थियो । त्यसैले अब हामीहरुले टिम राम्रो बनाएर पार्टी सभापतिको उमेदवार, पदाधिकारी राम्रो बनाएर जाने भन्ने कुरामा काम गरिहेका छौं ।
भनेपछि देउवाविरुद्ध यहाँहरुले सहमतिमा एकजना उमेदवार तय गर्नुहुन्छ ?
त्यसमा हाम्रो प्रयास जारी छ ।
आगामी निर्वाचन सभापतिका मात्र दुई जना उमेदवार हुन्छन् त्यसो भए ?
अब राजनीति हो । हाम्रो चाहना भनेको दुई जनामात्रै हुनुपर्छ भन्ने हो । हामी शेरबहादुर देउवाविरुद्ध एउटा प्रभावकारी टिम बनाउन पर्छ भनेर लागिरहेका छौं ।
सभापति देउवाले सभापतिमा च्यालेन्ज नै फिल भइरहेको छैन भनिरहनुभएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो तयारी भइरहेको छ । हामीले टिम दिँदा परिस्थितिलाई पूरै विश्लेषण गरेर अहिलेको समयमा को सभापति हुने, को उपसभापति, को महामन्त्री हुने, को सहमहामन्त्री हुने, को केन्द्रीय सदस्य हुने भन्ने सबै कुरा समयले माग गरेबमोजिमको आमकार्यकर्ताहरुको चाहनाअनुसार दिने भन्ने समझदारी छ ।
कांग्रेसमा एकातिर नेताहरु कारबाहीमा परेका छन् । अर्कोतिर फरक पार्टीबाट भित्र्याइएका छन् । यसका बारेमा यहाँको धारणा के हो ?
प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । अनुशासन समिति पनि निर्वाचन सकिसकेपछि गठन भएको हो । निर्वाचनमै अनुशासनहिन काम गरेकाहरुलाई कारबाही गर्ने भनेर नै बनाएको हो । फेरि कुरा के आउँछ भने यो विभाग जस्तै समयमा गरिएन । अहिले महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्नका लागि आमकार्यकर्ताहरुलाई तर्साउनका लागि गरेकोजस्तो देखियो ।
अरु पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गराउनु राम्रो पक्ष हो । गर्नु पनि पर्छ । तर, नेतृत्वले पार्टीमा भित्र्याउने समय उचित हो कि होइन भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । महाविधेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि अनुशासन समितिले कारबाही ग¥यो । यो समय मिलेन । एकातिर कारबाही गर्ने, अर्कोतिर अर्को पार्टीबाट नेता–कार्यकर्ता ल्याउँदा समय ठीक भएन । प्रवेश गराउनुपर्छ तर, समयको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा सरकारका कामहरुलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
झन्डैझन्डै दुईतिहाइ म्यान्डेडप्राप्त गरेको सरकारले जनतालाई प्रभावित पार्ने उल्लेखनीय कामहरु के गर्‍यो र ? जनताको हकहितका लागि के त्यस्तो कदमहरु उठाउन सक्यो र ? हामीले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सत्ता सञ्चालनका लागि वैधानिकता गुमाइसकेको निष्कर्ष निकालिसकेका छौं ।
किनभने यसले कुनै काम नै गर्न सकेको छैन । संविधानको भावना र मर्मको ख्याल नगरिकन दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । त्यसको उद्देश्य के रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ ।
यो सरकारले जनवादी केन्द्रीयता स्थापित गर्ने प्रयास गरेको हो कि भन्ने संकेत दिइरहेको छ । किन भन्नुहोला, तपाईंहरुको प्रेसकै कुरा गरौं । प्रेसलाई कन्ट्रोल गर्न बिलहरु ल्याइरहेको छ । प्रतिपक्षीको नाताले हामीले त्यस्ता गैरप्रजातान्त्रिक विधेयकहरु ल्याएको छ त्यसमा हामीले संसदमा आवाजहरु सशक्त ढंगबाट उठाइरहेकै छौं ।
यो सरकारले न विकासका कामहरु चित्तबुझ्दो ढंगले गर्न सकेको छ न जनताका कामहरु गर्न सकेको छ । बजेटमै सत्ताधारी दलका सांसदहरुको असन्तुष्टि देखियो । त्यसबाट नै थाहा हुन्छ यो सरकार कस्तो छ भन्ने । यो सरकार नेकपाको पनि सस्मित खेमाको सरकार हो कि जस्तो पनि छ । गतिविधिहरु त्यस्तै भइरहेका छन् ।